Banijya News | » ‘जबर्जस्ती अन्त जान्नँ’ ‘जबर्जस्ती अन्त जान्नँ’ – Banijya News
‘जबर्जस्ती अन्त जान्नँ’
डडेलधुरा — डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिन थालेपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं लैजान सरकारले डडेलधुरा पठाएको सेनाको हेलिकप्टर रित्तै फर्किएको छ । १७ औं पटक अनशनरत केसीले जबर्जस्ती अन्यत्र नजाने अडान लिएका छन् । स्थानीयले पनि सहमतिविपरीत केसीलाई लैजान नदिने भन्दै विरोध गरेका छन् ।
डा. केसीलाई मनाउन डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लागिपरेका थिए । तर उनलाई डा. केसीले भेट्नसमेत मानेनन् । अनशनको आठौं दिन सोमबार केसीलाई स्थानान्तरण गर्न डडेलधुरामा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । बिहानैदेखि अनशन तोडाउन र काठमाडौं लैजान सुरक्षाकर्मीले केसीलाई दबाबसमेत दिएका थिए ।
समर्थकले डडेलधुरा बजार क्षेत्रमा डा. केसीको समर्थनमा दिनभर प्रदर्शन गरे । बजार बन्द भयो । यता डडेलधुरा अस्पतालले भने डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर रहेको भन्दै सुरक्षित स्थानमा पठाउन आग्रह गरेको छ । ‘डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति झन्झन् कमजोर बन्दै गएको छ,’ अस्पतालका प्रमुख डा. जितेन्द्र कँडेलले भने । चिसोमा स्वास्थ्य अझ प्रतिकूल हुन सक्ने उनको भनाइ छ । डडेलधुरा अस्पताल नजिकैको एउटा कोठामा कात्तिक १८ देखि अनशन थालेका डा. केसीलाई ४ दिनअघि अस्पताल भर्ना गरिएको हो ।
यो समाचार डीआर पन्तले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।